Izinto zokuhlela ze-8.2 - i-Geofumadas
izinto umbhalo 8.2 Ukuhlela
Ukusuka kwisahluko 16 ukubheka phambili sijongana nemicimbi enxulumene nokuhlelwa kwezinto zokuzoba. Nangona kunjalo, kufuneka sibone apha izixhobo ezikhoyo zokuhlela izinto zezombhalo esisandula ukuzenza kuba ubume bazo bohlukile kwelezinye izinto. Njengoko siza kubona kamva, sinokuba nomdla ekwandiseni umgca, ukuqinisa imiphetho yepholigoni okanye ukujika ulayini. Kodwa kwimeko yezinto ezibhaliweyo, isidingo sotshintsho lwabo sinokuvela ngoko nangoko emva kokudalwa kwabo, ke ngoko kufuneka senze oku ngaphandle ngokubhekisele kwimiba yokuhlela ukuba sifuna ukugcina umgaqo-nkqubo wendlela yokuhamba ukusuka kokulula ukuya kokulula. Imicimbi entsokothileyo nokunxibelelanisa ubudlelwane babo obunengqondo. Masibone
Ukuba kufuneka siguqule isicatshulwa somgca, emva koko singacofa kabini kwisicatshulwa, okanye sibhale u "Ddedic" wokuyalela. Xa uvula umyalelo, i-Autocad isicela ukuba siyichaze ngebhokisi yokukhetha into eza kuhlelwa, ngokwenza oko, into iya kubhalwa kwisikwere kunye nesikhombisi esilungiselelwe ukuze sikwazi ukuguqula isicatshulwa ngendlela efanayo nesenza ngayo nayiphi na iprosesa yamagama. Ukuba ucofe kabini ngemouse, siya kwangoko kwibhokisi yokuhlela.
Kwiqela "Lombhalo" wethebhu "engaziwa" sinamaqhosha amabini akwanceda ukuhlela izinto zomgca. Iqhosha "lokuBala", okanye elilingana nalo, "Isikali sokubhaliweyo", likuvumela ukuba utshintshe ubungakanani bezinto ezibhaliweyo ngenqanaba elinye. Umfundi uya kufumanisa kwakamsinya ukuba phantse yonke imiyalelo yokuhlela, njengale, into yokuqala ethi Autocad isibuze kukuba siyayila into okanye izinto eziza kuguqulwa. Uya kuqhela kule nto, nje ukuba izinto zibonisiwe, siya kugqiba ukhetho ngeqhosha elithi "ENTER" okanye iqhosha lemouse ekunene. Kule meko, sinokukhetha umgca omnye okanye umgca wokubhaliweyo. Okulandelayo, kufuneka sichaze indawo esisiseko yokukhwela. Ukuba sicinezela u- "ENTER", ngaphandle kokukhetha, indawo yesicatshulwa nganye iya kufakwa. Okokugqibela, siya kuba phambi kwethu zokhetho ezine zokutshintsha ubungakanani kwiwindows yomyalelo: ukuphakama okutsha (okuyiyo ukhetho olungagqibekanga), chaza ubude bephepha (elisebenza kwizinto zombhalo kunye nesakhiwo esichazayo, esiya kufunda ngaso. kamva), umdlalo ngokusekwe kwitekisi esele ikho, okanye bonisa isikali sesikali. Njengoko sinokubona kwividiyo edlulileyo.
Kwinxalenye yayo, iqhosha elithi "Jusifying", okanye u "Textjustif", lisivumela ukuba sitshintshe indawo yokufaka ngaphandle kokuhamba esikrinini. Kule meko, ukhetho kwiwindows yomyalelo luyafana njengoko sivezise ngaphambili kwaye, ke, iimpembelelo zokusetyenziswa kwazo ziyafana. Ngapha koko, makhe sijonge olu khetho lokuhlela.
Ukuza kuthi ga ngoku, mhlawumbi umfundi sele ekubonile ukungabikho kwezinto ezikuvumela ukuba ukhethe uhlobo oluthile lonobumba kwikhathalogu ebanzi Windows enayo, kunye nokusilela kwezixhobo zokubeka inkalipho, umalukeke, njalo njalo. Kwenzeka ntoni kukuba la mathuba alawulwa yi-Autocad ngokusebenzisa "iZitayile zoMbhalo", esiya kubona ngokulandelayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Imihlaba ye-8.1.1 kwisicatshulwa
Post Next 8.3 iZimbo TextOkulandelayo "